Xerada Shadaha ee Hargeysa, ayaa noloshu ka socotaa iyada oo ay jiraan xaalado adag - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
“In aad hal ilmo haysato waa farxad. In aad saddex carruur ah haysato waa galad saddex laab ah,” ayaa ay tiri Fardows Abu-Bakr, oo 34 sano jir ah, oo dhowaan saddex carruur ilmood oo caafimaad qaba ku dhashey Hargeysa, Somaliland. Waxa ay il jacayl, farxad iyo cabsi yari ka muuqato ku eegeysey Sudays, Sucaad iyo Sacdiyo.
Laba sano iyo bar ka hor, ayaa ay Fardows ka dhinteen laba carruur ah, uuna dayacey ninkeeda, ka dibna ay ka soo carartey tuuladeeda oo ku taalla Itoobiya markii abaartu ay laysey dhammaan lo’dii uu qoyskeedu lahaa, oo ahayd isha keliya ee uu qoysku dakhli ka soo geli jirey. Waxa ay timid xero ay dadka soo barokacay deggan yihiin oo ku taalla Hargeysa laguna magacaabo Shadaha, iyada oo uu la socdo ilmahii keliya ee u badbaadey iyo iyada oo ku taameysa in ay dadaasho si ay u badbaaddo.
Fardows waa ay ka shalleysey go’aankeedii ay kaga soo tagtey Itoobiya. “Nolosha Shadaha waa ay ka xun tahay tii aan ku haystey halkii aan ka imid. Degaankeenna waxaan ku lahayn qaraabo iyo saaxiibbo. Halkaan qof noo jooga ma leh. Dadka qaar ayaa marka ay halkaan yimaadaan ay dantu ku khasabtaa in ay ku dawarsadaan (tuugsadaan) dariiqyada.”
Markii ay degtey xerada, ayaa Fardows waxa ay shaqo dhar dhaqid iyo nadaafad ah ka heshey qoysas, taas oo fursad u siisey in ay ku noolaadaan iyada iyo wiilkeeda. Maalin ayaa ninkeedii ay kala maqnaayeen isku arkeen waddada. Mar kale ayaa ay isku soo noqdeen oo halkii ayaa ay wax ka dhaceen, intii ay wada joogeen.
Markii ay Fardows uur qaaddey ayaa waxa ay dareentey in arrinta uurkeedu aanu caadi ahayn. Markii uu uurku kobcay ayaa ay aad u cuslaatey oo ay waxba qaban kari weysey. Iyada oo quus joogta, ayaa ay guriga iska fariisatey iyada oo baqdini ku jirto. “Ma tegi karin cusbitaal maaddaama aan ogaa in ay lacagtiisu badan tahay.”
Maalin aan fogeyn ayaa haweeney dhabteeda ku umul-raacdey. “Waxa aan u maleynayey in anigana waqtigeygii uu galey,” ayaa ay tiri. “Waa aan macasalaameeyey qof kasta oo i booqda waxaana aan weydiistey in ay i cafiyaan. Marna uma maleyneyn in aan geeri ka badbaadi doono.”
Kooxda MSF ee dadka ku booqata degaannadooda ayaa la kulmey Fardows iyaga oo sahan ku jooga xerada Shadaha oo ka eegaya dad u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah. Waxa ay u qaadeen cusbitaal, halkaas oo ay ku ogaatey in ay siddo saddex ilmood. “Aad ayaan u yaabey una baqey. Weligeey ma maqlin haween dhaley saddex carruur ah, sidee ayaa ay tani u dhici kartaa?”
MSF ayaa qaban qaabisey oo kharashkana ka bixisey si ay Fardows ugu dhasho cusibtaalka guud ee Hargeysa, halkaas oo qalliin looga umuliyey. Waa ay xasishey waana ay faraxdey markii ay dhashey saddex ilmood oo caafimaad qaba. “Carruurtu waa hibo Alle bixiyo oo dadkeyga Itoobiya ku noolna aad ayaa ay u qiimeeyaan. Halkaa, waxaan garanayaa niman ka tegey xaasaskooda markii ay carruur u dhali waayeen dhaqsihii ay iyagu rabeen.”
In kasta oo ay faraxsan tahay, Fardows waxaa aaney hurreyn nolosha adag ee xerooyinka dadka barokacay iyada oo haysata saddex ilmood oo ay hadda dhashey oo daryeel uga baahan. “Waxa aan mar kasta ka welwelaa sidii aan ku quudin lahaa. Xataa uma iibin karo saabuun, xataa uma iibin karo dhar maaddaama aabbahood uusan shaqeyneynin oo aan ku tiirsanahay wax ay dad kale na siiyaan. Uma sii shaqeyn karo anniga oo xannaaneynaya afar carruur ah.”
Maanta, ayaa ay saddexdeeda carruurta ahi ay keentey xarunta caafimaadka MSF markii saddexaad tan iyo markii ay dhasheen. “Sudays waa matagayaa, Sucaad waa ay qandhan tahay, Sacdiyana si wanaagsan ayaa ay naaska u jiqeysaa, laakiin waxa ay ugu yaraan halkaan ka heli karaan daryeelka caafimaadka ee ay u baahan yihiin.” Si yar ayaa ay u dhoolla-caddeyneysaa iyada oo muujineysa rajada ay mustaqbalka qabto: “Waa aan ku faraxsanahay in aan hadda mar kale noqoney qoys ballaaran, waxa aan jeclahay in aan arko carruurteyda oo korey oo qaangaar noqdey; ma doonayo in ay iga dhintaan.
Shaqada MSF ay ka wado Hargaysa
Sanadkii 2009kii, ayaa MSF ay bilowdey in daryeelka caafimaadka aasaasiga ah iyo daryeel nafaqeyn oo lacag la’aan ah ay siiso dadka nugul ee ku nool Somaliland, iyada oo xoogga saareysa carruurta ka yar shan sano jirka ee imanaya xarumaha caafimaad ee saddexda ah ee ay ku leedahay Hargeysa – degsiimooyinka Lug iyo Lacaag, Shadaha iyo State House. Waxa ay sidoo kale daryeelka ka horreeya iyo kan ka dambeeya dhaliddaba ay siineysaa haweenka uurka leh, waxaana ay bukaannada u baahan daaweyn degdeg ah oo nafo lagu badbaadiyo u gudbisaa cusbitaalka degaanka.
Tags: Baro-kac, Dhalmo, Hargeisa, Shadaha